Warbaahinta Ingiriiska Oo Baahisay In Somaliland Noqotay Goobtii Ugu Horeysay Afrika Ee Doorasho Loo Isticmaalayo Tiknolajiyadii Ugu Casrisanayd - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Warbaahinta Ingiriiska Oo Baahisay In Somaliland Noqotay Goobtii Ugu Horeysay Afrika Ee Doorasho Loo Isticmaalayo Tiknolajiyadii Ugu Casrisanayd
London November 12, 2017 – (Foore)- Warbaahinta dunida ayaa siyaalo kala duwan wali uga hadlaya in Somaliland loo aqoonsaday waddankii ugu horreeyey ee tiknoolajiyadda ugu casrisan u isticmaalaya doorashooyinka Madaxtinimada ee toddobaadkan ka qabsoomaya dalka.
Wargeyska caanka ah ee Telegraph ayaa warbixin uu arrintaasi ka qoray waxa uu ku bilaabay sidan: “Doorashooyinka 13-ka bishan ka dhacaya Jamhuuriyadda Somaliland ayaa noqday dhacdo taariikhi ah oo adduunka oo dhan isha lagu hayo. Waa dalkii ugu horreeyay oo qaaradda Afrika ay ka dhacdo codbixin dadka ay isticmaalayaan tiknoolajiyadda casriga ah gaar ahaan qalabka insha lagu ogaado.
Doorashada oo ay ka qeyb qaadanayaan wax ka badan toddoba boqol oo kun oo codbixiyeyaal ah ayaa waxaa u loolamaya saddex musharax oo ka kala socda saddexda xisbi ee kala ah Kulmiye oo uu u sharaxan yahay Muuse Biixi Cabdi, Waddani oo uu u sharaxanyahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro) iyo UCID oo uu u sharaxan yahay Faysal Cali Waraabe.
Waxyaabaha taariikhiga ah ee doorashadan ay kaga duwantahay kuwa badan oo Afrika inteeda kale ka dhaca ayaa ah in aanu tartamaynin madaxweynaha hadda xilka haya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, arrinkaasi oo aan Afrika ka dhicin sida caadiga ah.
Waxaa intaas sii dheer in ololaha doorashada oo billowday 21-kii Oktoobar uu si nabad galyo ah ku socdo, isla markaana aanay jirin wax dhibaato ah oo ka dhacday, iyo xanibaad dhanka dowladda ka timid.
Guddiga doorashooyinka iyo habka doorashada u dhacayso waa mid waqti badan la galiyay, wadar ahaana loo wada ogol yahay laga wada yahay si ka duwan meelo badan oo Afrika ka mid ah. Adduunka hore u maray, gaar ahaan reer galbeedka ayaa xagga hore kaga jira in tiknoolajiyadda la isticmaalo marka ay doorasho dhacayso, balse Afrika waa xaajo ku cusub.
Waxay noqonaysaa markii koowaad oo Afrika gudaheeda doorasho loo isticmaalo aaladaha casriga ah ee loo yaqaano IRIS ee wajiga qofka aqoonsanaya, haddii uu markale soo laabtana sheegaya.
Aaladahan ayaa waxaa la gaynayaa 1,642 goobood oo laga codaynayo, kuwaas oo ku kala yaallaa 21-k Degmo-doorasho ee Somaliland.
Waxaa doorashada hubinaya xalaalnimadeeda illaa 60 kormeerayaal caalami ah oo ka kala socda 24 dal oo adduunka ah, kana tirsan ururka caalamiga ah ee korjoogtada doorashooyinka ee lagu magacaabo EOM oo ay maalgaliso dowladda Ingiriisku.
Doorashadan ayaa waxa ay sidoo kale la gaar ahayd in musharixiinta ay ka qeybqaateen dood taleefishinka si toos ah looga baahiyay oo si furan su’aalo lagu weydiinayay.